Notice – Ogisiis- barnamjka kaalmada lacageed ee ugu danbiiya – UNHCR Syria
Notice – Ogisiis- barnamjka kaalmada lacageed ee ugu danbiiya
UNHCR ogisiis rasmi ah xafiiska
UNHCR Suuriya waxay nasiib ku lahayd awooda bixintaa barnaamijka gargaarka lacagta uu logo tala galay qaxootiga iyo qaxooti-doonka 8 sanad uu la soo dhaafay. lakan sidaa ugausiis yada hurii lugushiigay, UNHCR waxay ka xuntahay in misaniyada barnaamijka ee Suuriya walii sixoon huus ugu dhacsantahay, iyado u sabab naqadoonta isbadalaad xaga barnamijka gargarka lacagta qaxootiga iyo qaxooti-doonka suuriya juugaa.
ilaa 1 MARSO 2018:
Si loo kalmiyo qaxootiga iyo qaxooti doonka intii suuragal ah, ilaa 1 marso 2018, waxa la sii wadidoona barnaamijka gargaarka lacageed oo cuntada iyo barnaamijka kaalmada lacagta kashka uu qaxootiga goobalaha dhan iyo qaxooti doonka dagan degaanaka magalada xassakah uu buuxiya shuruudaha luuga bahanyahay dadka aad uu dhiban, lakin sida lacagta la yariiyay uu ogisiisyada huray logo sheegay.
qaxooti doonka gubalaha kasto uu iska quuray xafiiska UN ka 30 bisha lixaad 2017 ka dib ku ma jiruu dadka kalmada lacagta qadan doona , waxa dhici karta in ay ka mid naqdan marka qaxooti ahan loo aqoonsado ee na shuroodaha ducufiga buuxiyan.
Laga bilabo 1 marso:
laga bilaabo kuuwga marso 2018, barnamijka lacgta uu cuntada iyo kalmada lacgta kashka uu hada jiira waa dhaman doona, miishoda hal barnamij oo gargaar lacageed ah aya la soo bandhigi doona, uu la dhahu gargarka lacagta isticamalo badan, gragarkan lacgta isticmalada badan waxa la sii doona reeraha qaxootiga ugu daciifsan suuriya.
Lakin qaxooti-doonka dagan degangaa magalada xassakah waa loo sii wadi doona kalmada lacgta cuntada madama ayan haysan go’aanka qaxooti aqoonsiga sidas daraded uma qalmi karan gargarka lacagta isticmalada bada ama ay nooc oo ah kaalmo lacageed ilaa qaxooti ahan loo aqoonsado uu ana buuxiyan shurudaha ducfga
Go’aanka oo reeraha qaxootiga/qaxooti-doonka aad u daciifsan waxa logo garaay iyado la fiirinayo xalada qofka gaar ah iyo reerka dhan iyado la isticmalayo maclumadka UNHCR markii isqurga ama muqabalado hurii ka aroorisay. Sida luu kala saroo ducfiga reer kasto marka logo fiiriyo reeraha kale, waxa la dhigi doona qiyas lugu fiiriyo numrka dadka quuyska uu si qaas ah oo dhaciifsan iyo kuwaa daciif ahayn umaa aad daciif u ahayn.
Natiijada ka suubaxdo, UNHCR suuriya waxay uu arakta dadkan sii qaas aah in ay daciif yihiin marka lafiirinayoo ducfiga reerka:
Dadka ka yaar 19 sanad
Dadka kawayn 59
Dadka qabaa ducfii da’en ah uu la xaqiigiyay siida dadka nafoo ah amaa jiiruu da’en (joogtaa ah) qaboo.
Reeraha quuf dumaar ka mas’ool ah o qabto hal cunug ama kabadan uu naa qabin qaaf reerka ka mid ah uu kalmiiso.
Go’aminta dacfinimada qaxootiga magaladaha dhaan iyo qaxooti-doonka magalda xassaka waxoo dhicidoonya lixda bilood 2018 ugu horysa iyado la isticmalayoo macluumadka xafiiska UNHCR horay uu hiistay, taas oo ah, in ay wareysi gaar ah lahayn.
Hadii qofgaa uma quuyska risaladan suu kartay su banandhigi karaan macluumad cusub oo xaqiijinayso in qofka ama qof qoyska ka mid ah ay qaban curyaan daran ama jiroo jogto ah UNHCR huuri uu ugain, waxoo la suu Hadley karyaa qadka dagdaga: 0992898197 fuuran laga bilabu (9 subaxnimo) ila (2:30 duhurnimo) si uu oo dalbaayo mawcid moqabald qiimiiyn xalada lugu fiiriyo. Fadlaan ha soo ziyaran xafiiska UNHCR ha mwciid horay la hayn. Waxaa na uugata Hadi macluumad cusub uu waxas kusabsan la dhiibin natiijada ismabadalyso.
Waxaa laga dalbidoona reeraha resalad mobiil loo sudirin waxay ka qaybgalidoonan ducfii qiimayn, si loo firiyo in ay wilii u qalman kalmada gargarka lacagta, markaa ay xafiiska UNHCR ximayad jadiidis u soo rajicaan ama sabab kale.
Qiiminyaan daradeed, waa in qofka ama dadka reerka oo u dhaxiyo sanadkooda 19 ilaa 59 uu na huray u ugayn UN ka in ay qabaan curyanimo daran ama jiiroo joogto ah. Dadka kayar 19 sanad ama kawayn 59 sanad uu UN ka huray u ugtahay in ay qaban curyanimo daran ama jiroo joogta ah, si tuus ah aya loo tixgelin doona ducfiga. macluumaadkan waa la tixgeliaya marka la laxisabinayo ducfiga reerka. Sido kale, dadka waayeelka ah ama dadka curyaminta ah ee haysan daad reerkuda uu daryeeli doona, iyo reeraha quuf dumaar ka mas’ool ah o qabto hal cunug ama kabadan uu naa qabin qaaf reerka ka mid ah oo kalmiiso ka ma mid nagon doonan fiiriska ducfiga, sii tuus aya loo tixgelin doona.
Fadlaan hubso in aad wadatid dukunintiyadan si loo qiimeeyo:
(a) Taqreer ama warbixin cafimad qusaysaa xalad cafimad oo aad u xun ama curyanimo hadi jirta oo ay qabto/qabyo qofka reerka ka mid ah u dhaxiiya 19-59 sanad.
(b) Dukuninti sharci oo qusiya qof reerka ka mid ah (uu loo bahnay imashadida) uu laga yabo in ay xabsii ku jiraan.
Qiiminta ducfiga ka dib, qaxootiga iyo qaxooti-doonka waxa dagan magalada al xassaka waxa lu diri doona resalad mobilka mobilka hadi u qalmaan gargarka lacgta isticmalada badan ama u lahayn laga bilabo marka lacag bixnta so socota ( labadii biloodba mar).
Dadka huray logo shiigay in ay xaq u leyihiin waxa lu diri doona resalad mobilka mobilka lu shiigayo waqtiga lacagta su dhacyso.
Waxaa la siinaya 40,000 leero suuriye dadka la arkay in ay xaq u leyhiin gargarka lacgtaa isticmalada badan la dhibayo qofka reerka masu’oolka ka ah, iyo 10,000 leero suuriye qof kasta reerka ka mid ah. Qaxooti-doonka dagan magalada xassaka uu loo arko in ay daciif yahiin waxa la siinaya qof kasto reerka ka mid ah 7,000 leero suuyire bil kasto.
Marka la dhamiiyo qiiminta hordhaca ah, mustaqbalka qiiminta waxay ka mid naqo doonta zeyaradaha looga bahanyahay reer kasto in ay u sameyaan xafiisyada UNHCR, waxu kale zeyarada karka ximayada jadiidiskiisa.
Guud ahan, nidamkan wuxuu u oggolanayaa UNHCR inay mudanan ku siiso barnamijka kalamada lacagta qaxotiiga iyo qaxooti-doonga ugu ducfi badan magaladaha gublka xasaka iyo reerahooda.
si buuxda aya uga warqabnaa dhibaatooyinka ay uu keeyni duuno go’ankan adiga iyo qoyskaaga, laakiin waxaa rajiniina in aad nafahantiin, sababta go’aankan waa in miisaniyada suuriya sii aad ay huus uguu dhacday. Iyo sii loo sii wado kalmada dadka\_qosyada sixoon uu dhiban. Waxaa intaa dheer, qabka cusub waxa luga shaqiiya xafiisyada UNHCR gobolka dhan iyo waxaa fuliya xafiiska UNHCR dimashiq ee dhaman xafiisyada UNHCR suuriya.
Dhammaan kalamdaha iyo qidmadaha UNHCR ee kale way si socon doonta, sida kalmada cafimadka assasiga laga hiligaraa ciyadadaha ay maamusho hay’adaha UNHCR, iyo qidmadaha ximayada, iyo qidmadaha qanooniga. Waxaa jiiri doona qidmado ximayaad laga bixiyo hay’adaha UNHCR la shaqyso kutala baladka dhan waxa na hili karo qaxootiga iyo qaxooti-doonka. Si aad u hesho liiska markazyada ijtimaciga la shaqaysa UNHCR xafadada ku talo, fadlaan ka hel xafiiska UNHCR ama mutadawiciinta foomka macluumaadka qaska ku ah markazyada ijtimaciga.